यसरी गर्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रको सुधार
-हामी नेपाली, हामी बिश्वका एकदमै भाग्यमानी मानिस हौँ । किनकी हामीलाई प्रकृतिले सबै कुराहरु दिएको छ । मानब जाती लगायत हरेक प्राणिहरुको उत्पति र बिकास प्रकृती सँगै हुँदै आएको पाइन्छ । संसारमा प्रकृतीले ठगेका देश र भुभागहरु धेरै छन तर हामीलाई प्रकृतीले सबै कुराहरु दिएको छ ।
हामीसँग कृषिको लागि तराईको उर्बरा भूमी छ। उचाइ र हावापानीमा विविधता र सोहि अनुसारको उपभोग्य संभाब्य वस्तुहरु छन् । पहाड,जंगल, ताल,नदी र खोलानाला अनि हिम श्रृंखलाहरु यथेष्ट रुपमा छन्।
संसारका ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला १० वटा माउन्टेनहरु मध्ये ८ वटा त नेपालमै पर्छन् । पुर्व मेचि देखि पश्चिम महाकाली सम्म विविध किसिमको धरातल, हावापानी र आकर्षक पर्यटन स्थलहरु छन् । यति सानो देशमा १२२ थरी भाषाभाषी बिभिन्न समुदायहरु आ-आफ्नै सँस्कृति र रहन सहनमा एक-आपसमा मिलेर बसेका छन् । हामीमा धार्मिक र जातीय युद्द छैन । कहिलेकाहीं केहि झुण्डहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत राजनितीक फाइदाको लागि जातीय द्वन्ध मच्चाउन नखोजेको होइन तर नेपाली जनताले त्यो सबै अब बुझिसकेका छन् । प्राकृतिक श्रोतले भरपुर नेपालका हामी नेपाली जनता बिश्वकै धनि देशका सुखि नेपाली हौँ भनि छाति फुलाएर हिडनु पर्ने, तर अपसोच अझैपनि संसारको गरीब देशको सुचिमा पर्ने नेपाली भनी चिनिनु परेको छ।
संसारका बिभिन्न अनुसन्धान कर्ताहरुले नेपालमा खनिज पदार्थहरु को प्रबल संभावना रहेको भन्ने प्रमाणित समेत गरिसकेका छन ।अमेरिकाको हार्डवर्ड युनिभर्सिटीका रिसर्चर माइकेल ह्यारमनले पश्चिम नेपालको बिभिन्न पहाडहरुमा रिसर्च गरी ती पहाडहरुमा कोइला, फलाम र सुन खानी रहेको भनि रिसर्चको डाटा पेश गरका थिए। त्यस्तै नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थहरुको खानी रहेको पनि चिनियाँ अनुसन्धान टिमले प्रामाणित गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । ती खानीहरु क्रमशः धनगढी, कालिकोट, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगर थिए, जहाँबाट प्रेटोल निकाल्न सकिन्छ। त्यसतै बझाङ जिल्ला र दैलेखको सिरस्थान र नाभिस्थानमा निरन्तर बलिरहेको ग्याँस र पादुकास्थानमा खोलामा तैरिरहेको तेलले हाम्रो भुगर्भमा ग्याँसको संभावना पनि प्रचुर मात्रामा रहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। हिमालय र उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका जडिबुडीहरु त्यसै खेर गरहेका छन । अहिले उक्त ठाउँमा बसोबास गर्ने गरीब किसानहरु ती जडिबुडी फाँडेर इण्डियाको लागि जडिबुढि कलेक्सन गर्ने बिचौलिया हरुलाई घाँसको मुल्यमा हिमाली जडिबुटीहरु बेचिरहेका छन । नेपालको त्यही जडिबुटीहरु लगेर प्रसोधन गरी इण्डियाले आफ्ना प्रोडक्टहरु बनाएर बिश्व बजार खाइसकेको छ। नेपालका कच्चा पदार्थहरुलाई प्रशोधन गरी आफ्नो प्रोडक्ट निकालेर बिदेश निर्यात गरी, इण्डियाले खरबौँ डलर इण्डिया भित्र्याउन सफल भएको छ। यसमा म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, – तनहुँको ढोर फिर्दि गाबिस मालेबगर (धामिकुना) भन्ने ठाउँमा २०४० सालमा सुरौदी खोला सँगै एउटा पहाडमा ठूलो पहिरो गयो ( म सानै छँदा मेरो काका स्याङ्जाको टक्सार बाट तनहुँको ढोर फिर्दि भन्ने ठाउँमा बसाँइ जानु भएकोले काकाको घरमा हिडेर जाँदा सो ठाउँ बाटोमा पर्ने भएकोले मेरो आफ्नै आँखाले देख्ने मौका मिलेको थियो ) । त्यो पहिरोबाट खरी ढुङ्गा मात्र निस्केर खोला सेतै भयो । उक्त पहिरो देखेर खाली शिसा उठाउने बहानामा नेपाल पसेको RAW को एउटा एजेण्ट बिकल सबसेना भन्नेले Hindustan Unilever लाई खबर गर्यो । (यो पनि जानीराख्नुस कि, खाली शिसि, कबाडि, जुत्ता चपल उठाउने, साडी- कुर्था -कपढा बोकेर गाउँ गाउँ डुल्ने, कपाल काट्ने हजामका रुपमा नेपाल खटाइएका RAW का एजेण्टहरु नेपालमा गल्ली, गल्ली र गाउँ-गाउँमा छन, यस बारेमा मैले पहिलाका अंकहरुमा पनि लेखिसकेको छु ) त्यो पहाडको पहिरो बाट निस्केको खरी ढुङ्गा उठाई अनि पछि डाँडै सकिने गरी खनेर, सबै खरी ढुङ्गा Hindustan Unilever ले बर्षौ लगाइ लाखौं टन सित्तैमा इण्डिया लिएर गयो र त्यसबाट हाम्रा नेपाली नारीहरुहरलाई अति मन पर्ने Fair & Lovely क्रिम बनायो । नेपालबाट सित्तैमा उठाएर लगेको खरी ढुङ्गाले क्रिम र पाउडर बनाई हाम्रै नेपाली नारीहरुको करोडौं रुपैयाँ लुट्यो र अहिले पनि लुटिरहेकै छ । अहिले हिमाली जडिबुटी को हालत त्यस्तै छ । हामी सँग जता पनि प्राकृतिक श्रोतहरुको भण्डारै भण्डार छन । तर यसलाई बुझ्ने, सही सदुपयोग गर्न सक्ने बिबेकशील प्राणी ( दक्ष नेता ) अनि आफू सँग के छ र त्यसलाई के कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकार जनप्रतिनिधिहरु कोही भएनन । देशको श्रोत र साधन कुनैपनि ब्यकती बिशेषले आफ्नो मनोमानी तरिकाले केहि गर्न सक्दैन जसमा सरकारको सहमती, सहयोगको खाँचो पर्छ । यदि सरकारमा पदासिन ब्यक्ती हरुलाई साँच्चै नै देश बनाउने सोच हो भने यस्ता कुराहरुमा ध्यान जानु जरुरी छ। यी क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बिज्ञ नेपाली हरु धेरै छन तर सरकारले उनीहरुलाई चिन्दैन। गर्न सक्नेलाई अवसर दिने, निती नियम बनाउने र सहजताको वातावरण मिलाउने हो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र को बिकास र देशको बिकासमा समय लाग्दैन । यी कुराहरु बुझेको देश हाँक्ने नेता ( लिडर ) देशले कहिले पाउला ? सबैलाई सत्ताकै मोह छ । देशका ९० प्रतिशत नेताहरु करोडौं मा बिकेर भारतको लागि काम गर्छन र जनताको अगाडि राष्ट्रबादको नाँटक गरी जनता झुक्काएर देश लुटेको लुटै छन । केही गर्न सक्ने र भिजन भएको नेता निस्कँदा उसलाई सबै मिलेर पछार्ने प्रवृतीले देशले काँचुली फेर्न सकेको छैन। देशलाई आफ्नो बाउको बिर्ता सम्झेर लुछेको लुछै छन अनि हामी जनता हेरेको हेरै छौ। जनतालाइ चित्त त बुझेको छैन तर, चुनाब आएपछि फेरी दिमाग divert गरी मेरो पार्टीको नेता भनि तिनै भ्रष्ट र निकम्माहरु लाई भोट हालेको हालै छौ र तिनै सिमित ब्यक्तीहरु लाई कुर्सीमा थमाएको थमायै छौ।
फेरी पनि चुनाब आउँदै छ कुनै भिजनवालाले जितोस भन्ने मेरो चाहना हो ।
हामी भन्छौ नेपाल गरीब देश, सानो देश, भुपरिबेष्ठित देश ।
के हो यो गरीब देश भनेको ? के हो यो सानो देश भनेको ? के हो यो भुपरिबेष्ठित देश भनेको ?
आ-आफ्नो सोच हो तर मेरो बिचारमा बिकासको लागि देश सानो हुनु र भुपरिबेष्ठित हुनुले खासै फरक पार्दैन ।
विश्वका २३४ देशहरु मध्य नेपाल ठूलो बाट ९५ नम्बरमा पर्छ । नेपाल भन्दा साना देशहरु १३९ वटा छन र नेपाल जस्तै भुपरिबेष्ठित तर अति बिकसित देशहरु पनि छन ।
सानो देश, भुपरिबेष्ठित देश बिकास नहुने हो भने ती अति बिकसित देश कसरी बिकास भए त ! ? बिकासको लागि त सुशासन चाहिन्छ ।
देश बिकासको लागि सक्षम लिडर चाहिन्छ । आफू,आफ्नो राजनिती स्वार्थ, पद, आफ्नो परिवार, नातागोता, र आउरे-बाउरे मात्र सोच्ने ले देशको बारेमा केहि गर्दैन । उनीहरु जनता झुक्काउन सिर्फ ठूला ठूला कुरा गर्न सक्छन, धेरै बोल्न सक्छन, तर देशको लागि गर्न केहि पनि गर्न सक्दैनन। उनीहरुको स्लोगान भनेको हामी सानो देशका जनता, गरीब देशका गरीब जनता भनी बिदेशी सँग भिक मागी हिडछन । अनि नेपाल रित्याउने खेल खेलेका बिदेशी दलालहरु एनजिओ र आइएनजीओको नाममा सहयोगको भिक दिए जस्तो गरी नेपाललाइ लुटेको लुटै छन।
नेपाल दुइ ढूङ्गाको तरुल जस्तै भएर बिकास भएन भनी सँधै इण्डिया र चाइना सँग नेताहरु गुहार मागिरहन्छन । हातमा बत्ती लिएर आगो माग्दै हिडछन । देश सानो भयो भनेर कसैको हैकमता र डर त्रासमा रहनु बेकार र बगबासी कुरा हो । सबै देशहरुको आ-आफ्नो स्वायत्तता हुन्छ । भारत को प्रधान मन्त्री ठूलो र नेपालको सानो भन्ने हुँदैन । रसिया र क्यानाडा को पनि प्रधानमन्त्री नै हो र नेपाल र हैटीको पनि प्रधानमन्त्री नै हो । सबैको पदिय हैसियत र पदिय सम्मान उत्तिनै हो ।
यी त भए लामो भिजनका साथ अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्ने मोटामोटी केहि कुराहरु, तर देशको GDP बढाउन र देशको आर्थिक पक्ष मजबुद बनाउन के गर्नु पर्छ भन्ने बिषयमा मेरो केहि तर्कहरु राख्न चाहन्छु ।
म जापानको लागि पर्यटन दुत को हिसाबले नेपालको GDP को मूख्य श्रोत मानिएको पर्यटनलाइ के कसरी अगाडी बढाउनु र सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने बिषयमा केही आफ्नो बिचार राख्न चाहन्छु । म कामकै शिलशिलामा संसारका बिभिन्न देशमाहरुमा पुगेको छु । तर नेपाल जति सुन्दर देश मैले संसारको कुनै कुनामा पनि देखेको छैन ।
पर्यटनको लागि तलका ३ कुराहरुमा बिषेश ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
1. टुरिज्म इन्फ्रास्टक्चर ( बाटोघाटो, यातायातको सुबिधा एबं सर्बसुलबता, सुबिधायुक्त सफा बस्ने होटल र राम्रो सेवा )
2. हाइजेनिक खाना
3. शान्ती र सुरक्षा को ब्यबस्था
नेपालमा बिदेशी पर्यटकहरु
1 चाहे ट्रेकिङ को लागि जाओस,
2 चाहे साइटसिईङ को लागि जाओस ,
3 चाहे छुटी बिताउन जाओस,
4 चाहे जंगल सफारीको लागि जाओस,
5 चाहे जल सफारी को लागि जाओस,
6 चाहे हिमाल चढने उदेश्यले जाओस,
7 चाहे धार्मिक कारणले जाओस,
8 चाहे हनिमुनको लागि जाओस,
9 चाहे योगा तथा ध्यानको लागि जाओस, जुनसुकै परपोजले गए पनि सबैलाई चाहिने भनेको बस्न राम्रो प्रबन्ध भएको सफा सुग्घर होटल, हाइजेनिक खाना, र सुरक्षा नै हो । त्यसैले यी कुराहरुमा ब्यबसायीहरुले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । होटलमा स्टाफ हरु को बोलिचाली र ब्यबहार पर्यटकलाई आकर्षण दिलाउने मूख्य कुरा हो । जुन कुरामा जापान संसारमा सबैभन्दा अगाडी भएको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
नेपालमा कस्तो पर्यटक भित्र्याउनु जरुरी छ त ?
हाल नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरु मध्ये ८० प्रतिशत बिदेशी पर्यटकहरु बेरोजगारहरु , बिदेशमा लिएको बेरोजगार भत्ताले नेपालमा गएर लामो समय सस्तोमा खाने, बस्ने उदेश्यले जानेहरु, लागू-औषध सेबनको लागि जाने गजडीहरु अनि बिदेशको अनुभबको लागि छुटीमा सस्तोमा घुम्ने बिधार्थिहरु पर्छन। नेपालको टुरिज्म ले यस्तो किसिमको पर्यटकहरुलाई टारगेट गरेर नेपालको पर्यटन कहिले पनि उँघो लाग्दैन । यस्ता पर्यटकलाई टारगेट गर्नु भनेको देशको लागि फाइदा होइन घाटा हो । यस्ता पर्यटकले गर्दा नेपालको पर्यावरण दिनदिनै बिग्रदै गइरहेको छ । न उनीहरु सँग खर्च गर्ने पैसा हुन्छ , न त यस्तो लेबलको पर्यटक ले वातावरणिय सरसफाइ र पोलुसन को बारेमा बिज्ञ नै हुन्छन ! यस्ता तल्लो स्तरका पर्यटकहरुले नेपालको शहर देखि पहाड र हिमाल मा जथाभावी फोहोर फाल्दै हिडेर वातावरण र प्रकृती बिगारी रहेका छन । यिनिहरु १ रात होटलमा बस्न र १ बोतल पानी किन्दा पनि बार्गेन गरेर नेपाली बजारमा चलेको भन्दा सस्तोमा किन्न खोज्छन । त्यस्तो पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याएर नेपाललाई केहि फाइदा छैन र पर्यटन ब्यबसायीहरुलाई पनि केहि हुनेवाला छैन ।
नेपालको पर्यटनको बिकास गर्ने हो भने धनी पर्यटकलाई आकर्षण बढाउनु पर्छ । स्वीजरल्याण्ड, हवाई, गुआमको जस्तो बिश्वका धनी पर्यटक भित्र्याउने पोलिसी बनाउनु पर्छ । नेपालको टुरिज्म ब्राण्डेड गर्नु पर्छ। त्यही अनुसारको संसारभरी प्रचार-प्रसार हुनुपर्छ।
स्वीजरल्याण्ड पनि नेपाल जस्तै भुपरिबेष्ठित देश हो । जसले आफ्नै प्रकृति, डाँडाकाडा , हिम श्रृङखला हरुको संरक्षण र बिकास गरेर देशको हरेक ठाउँमा बाटोघाटो, ट्रेन तथा अन्य सुबिधा हरु पुर्याएको छ । देशको GDP को मुख्य श्रोत पर्यटनलाई बनाएको छ । त्यही अनुसार टुरिज्म इन्फ्रास्टक्चरको बिकास गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा फैसिलिटी अनुसारको दर-रेटहरु तोकेको छ। एउटा इजराएली गँजडीले कहिले पनि स्विजरल्याण्डमा गएर गाँजा खाएर, अनि सस्तोमा बसेर आउँछु भन्ने कल्पना गर्न सक्दैन । जहाँ धनी टुरिष्टहरुले मात्र टारगेट गरेका हुन्छन । संसार भरीका धनि मान्छे को कल्पना नै १ पटक स्वीजरलायाण्ड पुग्नु भन्ने इमेज बनिसकेको छ । नेपाल स्वीजरल्याण्ड भन्दा धेरै राम्रो छ , हामीले पनि टुरिज्म इन्फ्रास्टक्चरहरु को बिकास गरेर संसार भरिका टुरिष्टहरुलाई नेपालमा तान्न सक्ने हो र त्यो अनुसारको इमेज बनाउन सक्ने हो भने नेपाललाइ World’s kingdom of Tourism भनेर घोषणा गर्न गराउन सकिन्छ। जसको लागि सबैभन्दा पहिला पुर्वाधारहरु निर्माण हुनु पर्छ ।
स्वीजरल्याण्डले बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षण गरे झै जापानले भने बाह्य पर्यटनलाई भन्दा आन्तरिक पर्यटन लाई नै बढी फोकस गरेको पाइन्छ । जापानले हरेक जिल्ला-जिल्ला मा केहि न केहि पर्यटक स्थल बनाएको छ । चाहे त्यो ठाउँको सानो उत्पादन हुने फलफूल या गिफ्ट पाकेट बाट किन नहोस प्रचार-प्रसार गर्ने र ती ठाउँहरुलाई चिनाउने केहि न केहि माध्यम बनाएको हुन्छ। देश भित्रै पर्यटनको प्रचार-प्रसार गरी आन्तरिक पर्यटकहरुलाई यता र उता घुमाई देश भित्रै पैसा खसाल्ने पोलिसी बनाएको पाइन्छ । यो बाट हाम्रो देशले पनि नेपालको पुर्व मेचिको इलाम चियाबारी देखि पश्चिम महाकाली दार्चुलाको चारकिला धाम सम्म एउटा एउटा क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुरुपको इन्फ्रास्टक्चर तयार पारी आन्तरिम टुरिज्म लाई पनि प्रबर्धन गर्ने हो भने सिङ्गापुर, मलेशिया, थाइल्यांड तिर पैसा खर्च गर्न जाने धनाड्य नेपालीहरु आफ्नै देशमा त्यो भन्दा राम्रो ठाउँहरु छन भन्ने चिन्ने छन। र आन्तरिक पर्यटन तिर झुकाब बढाउने छन। यसो गर्न सकेमा आन्तरिक पर्यटनको बिकास हुनेछ भन्ने मलाइ लाग्छ । अनि अर्को कुरा नेपालका पर्यटक स्थल भनेर चिनिने ठमेल, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन तिरका होटलमा बस्न गयो भने, एक रातमै हजारौँ खर्च गर्न सक्ने नेपाली पर्यटकलाई भन्दा एक छाक भात पनि बार्गेन गरेर खाने गँजडी र भाङग्रे गोरो छाला भएको बिदेशीलाई प्रायोरिटी र वढि सेवा दिएको पाइन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लागेका हरुको यस्तो सोचाइ र ब्यबहारले पनि नेपालको आन्तरिक परयटकलाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
अन्तमा समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने , हाल नेपालमा जाने पर्यटक भनेको २० प्रतिशत राम्रा पर्यटक पनि हुन्छन भने, ८० प्रतिशत झोले, गँजडी, होमलेश, लफुङगा, बिदेशमा सरकारबाट बेरोजगार भत्ता खाएर बाँचेकाहरु नै हुन। यस्ता टुरिष्ट नेपालमा जानु भन्दा नजानु ठिक छ। नेपालीहरु बिदेशी गोरो छाला देख्ने बित्तिकै निकै ठूलो र धनि भन्ने सोच्छन, सकेसम्म घरमै लान्छन, खुवाउँछन, सेवा गर्छन र तिनीहरुलाइ आफ्नो बनाई फाइदा लिने सोच बनाउँछन। तर उल्टो तिनै लफुङ्गाहरुले नेपाली गरीब जनताको खाने र फाइदा लिने गरिरहेका हुन्छन। नेपालीले दिएको सेवा, मान-सम्मानले उनीहरुलाई भूँइमा खुट्टो नै हुँदैन। नेपालीले दिएको सम्मानले तल्लो स्तरका ती बिदेशीहरु आफूले आफैलाई गर्व गर्न शुरु गर्छन र आफ्नो देशमा फर्केसी तिनै सोझा नेपालीहरु लाई हातले खान्छन, ट्वाइलेट गरेसी हातले धुन्छन, हप्तामा १ दिन मात्र नुहाउँछन, आदि इत्यादि भन्दै हाँसोको पात्र बनाउँदै खिल्लि उडाउँछन । यस्ता लफुङ्गा टुरिष्ट हरुले नेपाल र नेपालीलाई बिबिध किसिमका शोषणहरु गरेको र उल्टै कंगाल र बर्बादी बनाइरहेका घटनाहरु धेरै छन । यस बिषयमा नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बिभाग र पर्यटन ब्यबसायीहरुले बिशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। र टुरिज्म सेक्टरमा एकदम बेसबाटै सुधार गरी स्विजरल्याण्ड, हवाई, गुआम, बालीको जस्तो ब्यबस्थित र ब्राण्डेड टुरिज्म बनाई नेपाललाई बिश्वको पर्यटन राजधानी बनाउनु जरुरी छ । यदि यसो गर्ने हो भने कुनै पनि नेपालीलाई पैसाको लागि बिदेशिनु पर्ने आवश्यक्ता हुने छैन ।
लेखक पौडेल जापानका लागि पर्यटन दुत हुन
सिडेन बाग्मती प्रदेशको अध्यक्षमा चालिसे निर्बिरोध